एमालेको उपाध्यक्षमा पूर्वमाओवादीका बादल ! – चितवन मिडिया
एमालेको उपाध्यक्षमा पूर्वमाओवादीका बादल !
कपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटे राम बहादुर थापा वादललाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकार रहँदासम्म मन्त्री पद पनि नजाने र पार्टी फुट्दा ओली नेतृत्वको पार्टीमा उपाध्यक्ष समेत पाउने आश्वासन पाएपछि बादलले प्रचण्डको क्याम्प छोडेको कतिपय नेताले बताएका छन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा वादल गएनन् । वादल पूर्व माओवादी नेता हुन् । कुनै समय वादलले प्रचण्डको साथ छोडेर पार्टी फुटाएका थिए । पछि पुनः प्रचण्डकै पार्टीमा एकता गर्न आएर उनी गृहमन्त्री भएका हुन् ।अहिले नेकपामा वादलले प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सहभागि नभएर आफु प्रचण्डको गुटमा नरहेको संदेश दिएका छन् । उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा राम बहादुर थापा वादल गएनन् । वादल पूर्व माओवादी नेता हुन् । कुनै समय वादलले प्रचण्डको साथ छोडेर पार्टी फुटाएका थिए । पछि पुनः प्रचण्डकै पार्टीमा एकता गर्न आएर उनी गृहमन्त्री भएका हुन् ।जुनेलो डेलि
अहिलेको संघीयता भन्दा पाँच बिकाश क्षेत्र नै ठिक थियो ,,हामी पाँच बिकाश क्षेत्र नै बनाउछौ…प्रकाण्ड
मलाई केपी ओली र अदालतले एक्लै पारे साथ दिएनन म के गरुम ?: माधव नेपाल